လူရွှင်တော်ဘုရင်ကြီး ဦးဧရာအတွက် သေတမ်းစာမဖတ်ဘူးဆိုတဲ့ လူရွှင်တော်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဒိန်းဒေါင် – CharTake
chartake | December 19, 2020 | Cele News | No Comments
ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်းက COVID-19နဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ဝါရင့်လူရွှင်တော်ကြီး ဦးဧရာအတွက် လူရွှင်တော် လောကနဲ့ ပတ်သက်ခြင်း မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ သေတမ်းစာမျိုးဖတ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လူရွှင်တော်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌဒိန်းဒေါင်က ရေးသားထားတာပါ။
“သို့ ဦးဧရာ ဒီစာကိုမဖတ်နိုင်မှန်းသိပေမဲ့ ကျွန်တော် ရေးလိုက်ပါတယ်။ လူ ရွှင်တော်တွေ လူတန်းစေ့ နေနိုင်အောင် တိုက်နဲ့ကားနဲ့ နေနိုင်အောင် လူရွှင်တော်တွေ နေရာရအောင် ကိုယ်ကြိုးမဖက် အနစ်နာခံပြီး တိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် လူရွှင်တော်တစ်ချို့ကိုယ်စား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် လူရွှင်တော်တစ်ချို့လို့ သုံးလိုက်လို့ ဦးဧရာ တမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်???
တစ်ချို့က တစ်ချို့မို့လို့ပါ ? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျွန်တော်အပါအဝင် လူရွှင်တော် တစ်ချို့ကတော့ ဦးဧရာကို လူရွှင်တော်လောကရဲ့ ဘုရင်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ် လိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် သေတမ်းစာ မဖတ်ဘူး? ဘာလို့လဲသိလား လူရွှင်တော်အသင်း တည်တံ့သ၍ ဦးဧရာနံမည်ကို မမေ့ချင်လို့ပါ ။ဒိန်းဒေါင် လူရွှင်တော်အသင်း (ဥက္ကဌ) ရန်ကုန်” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ် ။ ခရက်ဒစ်
Unicode … လူရှငျတျောဘုရငျကွီး ဦးဧရာအတှကျ သတေမျးစာမဖတျဘူးဆိုတဲ့ လူရှငျတျောအသငျးဥက်ကဋ်ဌ ဒိနျးဒေါငျ
ဒီကနေ့ နံနကျပိုငျးက COVID-19နဲ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့တဲ့ ဝါရငျ့လူရှငျတျောကွီး ဦးဧရာအတှကျ လူရှငျတျော လောကနဲ့ ပတျသကျခွငျး မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ သတေမျးစာမြိုးဖတျမာ မဟုတျဘူးလို့ လူရှငျတျောအသငျး ဥက်ကဋ်ဌဒိနျးဒေါငျက ရေးသားထားတာပါ။
“သို့ ဦးဧရာ ဒီစာကိုမဖတျနိုငျမနျးသိပမေဲ့ ကြှနျတျော ရေးလိုကျပါတယျ။ လူ ရှငျတျောတှေ လူတနျးစေ့ နနေိုငျအောငျ တိုကျနဲ့ကားနဲ့ နနေိုငျအောငျ လူရှငျတျောတှေ နရောရအောငျ ကိုယျကွိုးမဖကျ အနဈနာခံပွီး တိုကျပှဲဝငျပေးခဲ့တဲ့အတှကျ လူရှငျတျောတဈခြို့ကိုယျစား ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ လူရှငျတျောတဈခြို့လို့ သုံးလိုကျလို့ ဦးဧရာ တမြိုးမထငျပါနဲ့နျော???
တဈခြို့က တဈခြို့မို့လို့ပါ ? ဘာပဲဖွဈဖွဈပါ ကြှနျတျောအပါအဝငျ လူရှငျတျော တဈခြို့ကတော့ ဦးဧရာကို လူရှငျတျောလောကရဲ့ ဘုရငျအဖွဈ ဂုဏျပွုသတျမတျ လိုကျပါတယျ ။ ကြှနျတျော သတေမျးစာ မဖတျဘူး? ဘာလို့လဲသိလား လူရှငျတျောအသငျး တညျတံ့သ၍ ဦးဧရာနံမညျကို မမခေ့ငျြလို့ပါ ။ဒိနျးဒေါငျ လူရှငျတျောအသငျး (ဥက်ကဌ) ရနျကုနျ” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ ။ ခရကျဒဈ
ထွန်းကိုကိုရော ကျွန်တော်ပါ ကျန်းမာရေးအခြေနေ ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ ဦးကျော်သူ